Home Wararka Ciidamada DF oo sheegtay iney qabteen gaari waxyaabaha qarxa siday
Ciidamada DF oo sheegtay iney qabteen gaari waxyaabaha qarxa siday
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwo ka tirsan qeybta 27aad ayaa howlgal waxay ka sameeyeen wadada xiriirisa Magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee Gobolka Sh/Dhexe.
Howlgalka ayaa waxaa hoggaaminayay Taliyaha Guutada 4aad ee qeybta 27aad Col. Saney Cabdulle Gaab, Abaanduulaha qeybta 27aad Saalax Yaquub iyo Saraakiil kale. Waxaa howlgalku ka koobnaa mid ay ku baarayeen miinooyinka dhulka la geliyo iyo Gaadiidka.
Saraakiisha Ciidamada ayaa sheegay in howlgalka lagu qabtay Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo miinooyin aasayay iyo Gaari laga soo buuxiyay waxyaabo qarxa, kaasoo weerar lagu fulin rabay.
“Howlgalkan waxaa uu daba socdaa howlgallo saacadihii la soo dhaafay Ciidamada Kumaandoska DANAB ka sameynayeen degaanada, Xawaadley, Jameeco iyo degaano kale” ayuu yiri Taliyaha Guutada 4aad ee qeybta 27aad Col. Saney Cabdulle Gaab.
Jidka isku xira Magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee Gobolka Sh/Dhexe ayaa waxaa horey uga dhacay weeraro iyo qaraxyo mas’uuliyiin kala duwan lagu dilay, taasoo sababtay in madaxda Al-shabaab ay wadadaas isticmaalkeeda joojiyaan.
Previous articleWasiir Abdullahi “ Ma Jiro Dalab Ciidamo Ah Oo Maamulka Hirshabelle U Soo Gudbiyay Dowlada”
Next articleHirshabeelle oo ka hortimid go’aanka Golaha Wasiirada, sheegtayna in ciidanka la soo kordhin doono
Muqdisho Online main headquarter is in Mogadishu, Somalia, but the office remains anonymous, because of constant threats against its staff.
Farmajo Iyo Beyle oo laga Rabo inay Sheegaan Halka ay ku Baxday $1.7 bilyan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo bilaabay raadinta dhalinyaradii loo qaaday Eritrea
Ingiriiska oo tababar siisay Ciidamo ka kala tirsan ATMIS & CXDS
Behind blast walls, Somali Parliament to choose new president
Amina Cali (Amina Sonna) - May 14, 2022
Two former presidents will face off against the incumbent in Somalia's long-delayed presidential vote on Sunday behind blast walls to protect lawmakers from Islamist...
Somalia’s titanic presidential race: What we know so far
Xuseen Macallin - May 9, 2022
After months of waiting, Somalia is set to hold presidential elections on May 15, which has been set aside as the day for destiny...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - May 2, 2022
Somali workers under the aegis of the Federation of Somali Trade Unions (FESTU), on Sunday, issued a strong message that the decimation of workplaces...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - May 1, 2022
When Mariane Ibrahim opened her elegant, new three-story art gallery in Paris last September, she became the first Black gallerist to set up shop...
AIPEI (Taiwan News) — Taiwan on Sunday (April 30) donated US$550,000 (NT$16.91 million) and a container of humanitarian supplies to help those affected by...
Ganacsatada Muqdisho oo ku biiray odayaasha diiday dulmiga Farmaajo
Ubax Tahliil oo looga adkaaday kursiga HOP 60